Cumar Cabdirashiid oo Eedeyn Kulul u soo Jeediyay Xukuumadda Xasan Cali Khayre (Dhagayso)
Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxaa uu eedeyn kulul uu u soo jeediyay dowladda Xasan cali Khayre iyo tallaabadii C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) loogu gacangeliyay Dowladda Itoobiya.
Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo xubin ka ah Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa beeniyay in xukuumadiisii ay Itoobiya la saxiixatay heshiis maxaabiis is weydaarsi ahaa.
Wuxuuna sheegay in heshiiska ay Golaha Wasiirada Soomaaliya u cuskadeen wareejinta C/kariin Sheekh Muuse, uu ahaa heshiis dhex maray Dowlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Maamulka Galmudug, oo xadka labada dhinac ay colaad ku dhex martay.
Isagoo la hadlayay Laanta afka Somaliga ee VOA ayuu Sharmaarke sheegay inay soo gaartay waxa ay Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Khayre u cuskatay wareejintii Sarkaalka Qalbi Dhagax, isla-markaana ay arrintaasi tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn, Xukuumadiisii ayuu sheegay inaysan jirin cid ay u igmatayba in Itoobiya la gaarto heshiis ku saabsan maxaabiis is dhaafsi.
Sidoo kale waxaa uu cadeeyay in ka shakhsi ahaan ay khalad weyn la tahay in muwaadin Somaliyeed loo dhiibo Dowladda Itoobiya, isla-markaana aysan arrintaasi ahayn wax loo baahnaa in la sameeyo.
Haddii dembi lagu soo ooggi lahaa Qalbi Dhagax amaba muwaadin kaloo Soomaaliyeed, ayuu sheegay inuu jiro hab loo maro oo lagu hubinayo in dembiga lagu soo oogay uu yahay mid sax ah iyo in kale. Xitaa haddii dembiga lagu heli lahaa ay ahayd in dalka gudahiisa maxkamad lagu soo saaro, ha yeeshee ay khalad tahay in muwaadin aad ka masuul tahay u gacangeliso dal shisheeye.